लेख दुरुपयोग विकार | USAHello | USAHello
लेख दुरुपयोग विकार
तपाईं पनि धेरै रक्सी पिउन वा लागूऔषधको धेरै खाने गर्दा लागूपदार्थको दुरुपयोग विकार छ. लागूपदार्थ र रक्सीको प्रयोग तपाईँको शरीर हानि र आफ्नो जीवन खराब तरिका असर.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा, मान्छे भनेर भन्न “दुरुपयोग” औषधि वा रक्सी प्रयोग पनि धेरै अर्थ, वा नराम्ररी. छलफल पदार्थ दुरुपयोग र रक्सी र अन्य तरिका को पदार्थ दुरुपयोग को दुरुपयोग तपाईं लागूऔषधको धेरै संग रक्सी वा व्यवहार धेरै पिउन बनाउन.
आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो जीवन विकार असर कि सामाग्री मा को प्रयोग. जब तपाईं लागूपदार्थ वा रक्सीको भर, तपाईंले तिनीहरूलाई बाँच्न सक्दैन महसुस.
लक्षण तपाईं रोग कारण छ कि भावना र परिवर्तन हो. लागूपदार्थको दुरुपयोग विकार को लक्षण केही छ:
रक्सी वा लागूपदार्थको लागि सहिष्णुता
सहिष्णुता तपाईं अधिक रक्सी पिउन वा प्रभाव महसुस गर्न थप लागूपदार्थ लिन अर्थ.
बाहिर ड्रप समस्या
निकासी तपाईं रक्सी वा लागूपदार्थको दुरुपयोग पिउने रोक्न किनभने तपाईं बिरामी महसुस हुँदा छ. यसलाई मा रक्सी वा लागूऔषधको खपत गर्न प्रयोग किनभने तपाईंको शरीर तपाईं बिरामी महसुस.
लागूपदार्थ र रक्सीको कुनै भन्दै समस्याहरू
तपाईं पनि धेरै पिउन लागि वा लागूपदार्थ धेरै खान गाह्रो. आफ्नो साधारण जीवन भाग छैन महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू जाँदै रोकिनेछ (परिवार, काम र खेल) किनभने रक्सी वा लागूऔषधको प्रयोग.
जब कुराहरू खराब छन् पनि रोक्न छैन
तपाईं हुनत उनीहरूले आफ्नो जीवन मा नकारात्मक प्रभाव पार्न थाहा रक्सी वा लागूपदार्थको दुरुपयोग पिउन जारी. नकारात्मक प्रभाव केहि बुरा गर्दै. उदाहरणका लागि, रक्सी धेरै पिउने तपाईं बिरामी महसुस, तर तपाईं जे भए पनि यो पिउन जारी बनाउँछ.
तपाईं सामाग्री को प्रयोग मा एक खलबल छ भने, तपाईं धेरै समस्या हुन सक्छ. यी समस्याहरू केही छन्:
तपाईं आफैलाई वा अरू कसैलाई चोट गर्न सक्छन्.
स्वास्थ्य समस्या प्राप्त गर्न सुरु. उदाहरणका लागि, तपाईं धेरै रक्सी पिउन भने, तपाईं कलेजो वा मस्तिष्क वा हृदय वा पेट मा समस्या हुन सक्छ.
रक्सी वा लागूऔषधको तपाईंको प्रयोग तपाईं नियमित गतिविधिहरु अभ्यास रोक्न बनाउँछ. उदाहरणका लागि, किनभने रक्सी वा लागूऔषधको प्रयोग आफ्नो बच्चाको लागि खेल खेल जाँदै रोकिनेछ.
तपाईंको व्यापार मा रक्सी र लागूऔषधको तपाईंको प्रयोग र आफ्नो परिवार प्रभावित. उदाहरणका लागि, किनभने रक्सी वा लागूऔषधको प्रयोग काम गर्न जाने छैन.
त्यहाँ बनाउन धेरै कारण तपाईं ग्रस्त पदार्थ दुरुपयोग विकार छन्. यी कारणहरूले गर्दा केही:
रक्सी र लागूपदार्थ तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ धेरै ठाउँमा उपलब्ध छन्. उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका मा शहर समावेश बारहरू धेरै. धेरै मानिसहरू आफ्नो साथीहरूसँग बारहरू जान मन. रक्सी पिउने कुरा मान्छे जो कानुनी छ, यो रमाइलो छ विचारमा छ. यो जीवन को एक भाग हो किनभने रक्सी प्राप्त गर्न सजिलो.
आफ्नो आमाबाबुको एक विकार वा लागूपदार्थको दुरुपयोग संक्रमित थियो यो संग संक्रमित छ भने, यो एउटा छ गर्न सजिलो छ.
तपाईं सामान्यतया तिनीहरूलाई बनाउन. बानी तपाईं निद्रामा अघि आफ्नो दाँत लिंदा जस्तै नियमित गर्न केही छ. उदाहरणका लागि, रक्सी पिउने तपाईं कम परेशान बनाउँछ र तपाईं खुसी महसुस भने, तपाईं थप के तपाईं महसुस बाटो पिउन मन किनभने सुरु गर्न सक्छन्.
त्यहाँ मानसिक स्वास्थ्य को लागि अर्को चुनौती हो. तपाईं अर्को मानसिक रोग, रक्सी वा लागूपदार्थ, आत्म-दबाइ को प्रयोग ग्रस्त भने. राम्रो महसुस गर्न रक्सी वा लागूपदार्थको प्रयोग गर्दा तिनीहरूले आत्म-उपचार छ.